Crush တွေအများကြီးရှိတဲ့သူတွေဟာ ထက်မြက်သူတွေဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်း (၅) ချက်
June 12, 2019 Cele Love 0
Crush တွေအများကြီးရှိတဲ့သူတွေဟာ ထက်မြက်သူတွေဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်း (၅) ချက် Crush ဆိုတာ ကိုယ့်ဖက်ကနေတစ်ဖက်သတ် ကြိတ်ပြီးကြွေနေရတဲ့သူကို ဆိုလိုတာပါ။ တစ်ချို့လူတွေမှာတော့ Crush တစ်ယောက်ပဲရှိသလို၊ တစ်ချို့လူတွေမှာကျတော့လည်း တစ်ယောက်မက အများကြီးရှိနေတတ်ပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ Crush အများကြီးရှိတဲ့သူတွေဟာ ထက်မြက်တဲ့သူတွေ ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ် နော် …… (၁) အကောင်းမြင်စိတ်ရှိတယ် […]
အသက်ဘေးက လွတ်မြောက်စေတဲ့ သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်အစွမ်း (လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်က ဖြစ်ရပ်မှန်)….
အသက်ဘေးက လွတ်မြောက်စေတဲ့ သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်အစွမ်း (လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်က ဖြစ်ရပ်မှန်)…. အသက်ဘေးက လွတ်မြောက်စေတဲ့ သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်အစွမ်း (လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်က ဖြစ်ရပ်မှန်)အချိန်မှာ မွန်းလွဲသုံးနာရီခန့် အချိန်ဖြစ်သည် …။ တိတိကျကျဆိုရလျှင် ၁၉၇၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၅ ရက်၊ မွန်းလွဲ သုံးနာရီခန့် […]
“အဖေနဲ့အမေ မရှိပေမဲ့ မောင်လေးရှိတယ် အားမငယ်နဲ့ နေပြန်ကောင်းလာမှာပါ” ဆိုတဲ့ ၇ နှစ်အရွယ် ကောင်လေး…. Zhao Wenhui လို့ အမည်ရတဲ့ အသက် ၁၁အရွယ် ကောင်မလေးမှာ Zhao Wenjing လို့ အမည်ရတဲ့ ၇နှစ်အရွယ် မောင်လေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ မောင်နှမ နှစ်ယောက် […]
(၂၀၁၉) ခုနှစ် ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများအတွက် (၁) နှစ်စာ ဟောစာတမ်း ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ အတွက် ဘ၀တစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းလဲမြင့်တက်လတ္တံ့ …. ။ အတိတ်ကံကိုအကြောင်းပြုပြီးငွေအစုလိုက်အပုံလိုက်ရခြင်း၊ထီဆုကြီးပေါက်ခြင်း၊ခြံ၊ကား၊ကျောက် ကောင်းသောဝင်ခြင်းတွင်ရှိလတ္တံ့။ အချစ်ရေးမေတ္တာရေးကံကောင်းခြင်း၊မျက်နှာပွင့် စန်းပွင့်ခြင်း၊ငွေကြေးဥစ္စာပစ္စည်းများ စုဆောင်းတိုးပွားခြင်းတို့ကြုံရလတ္တံ့။ စိတ်ကူးဥာဏ်ပေါ်သလောက် လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါ။အချိန်မဖြုန်းသင့်။ရည်ရွယ်ချက်ရှိသမျှ ရဲရဲလုပ်ပါ။ ဘာပဲလုပ်လုပ် အတိုက်အခံ အခက်အခဲ စိတ်ပူစရာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာများကြုံတွေ့ပြီးမှ […]